The itsva NC Ankai kutora kuedza wekutaura yokumwe ano, kushandisa pagadzirwe mukuru-mugumo CNC machine zvigadzirwa kuenda, mukuru Rigidity, zvakanaka dzigadzikane.
Kambani awana yakazara akagadzirwa Technology South Korea HJM kambani, boka raivapo kuroorwa chokurukisa, matatu akabatana linkage kudzora vatatu yezvisikwa CNC wehunyambiri lathe azvikuya yakaoma muchina dzakatevedzana zvigadzirwa; dzinewo yakakwirira wegiredhi CNC lathe azvikuya yakaoma muchina chokurukisa kaviri, nomwe akabatana linkage mana, kusvika kunonyanyisa papi zvinodiwa vanoshandisa zvakasiyana.
NC kutora kuedza kushandisa zvigadzirwa: kunyanya akakodzera motokari, zvinhu zvemagetsi, kutaura, IT indasitiri, zvokurapa, avhiyesheni, mauto, Hardware, zvemaziso uye hydraulic zvikamu maindasitiri mune zvizhinji makuru, marefu nemazvo, duku kunzwisisa zvikamu kubudiswa, kufadza clamping tsvimbo zvinhu dhayamita 38mm, anogona kuzadzisa maawa 24 vasina akavatarisa kugadzirwa.
The muchina adopts kumhanya CNC ezvinhu, mberi pakuvara chokurukisa uye akavaka-pamatunhu chisarudzo encoder, zvikamu marongerwo, yepamusoro uye kunzwisisa (yakadai mabheyaringi, bhora sikuruu, Linear mutungamiriri vari kuunzwa mufashoni zvigadzirwa), vepamusorosoro kugadzira, fekitari rokuongorora ne dzimwe nyika dzakabudirira yetsika, saka zvigadzirwa anosvika yemarudzi mberi zvakadini.
High Tech, mukuru pokutangira, yepamusoro ndiyo kumhanyisana rusingaperi Ankai idzva, Ankai vatsva vanhu mweya "Unhu rokutanga, basa rikurumidze, kupayona mweya uye mafungiro, nomwoyo wose vatengi uye zvakafanana kukura.
CNC machine chigadzirwa zvinhu: